Bilaogin’ny vehivavy Afrikanina: ny zon’ny vehivavy, herimpom-behivavy, fiovam-pinoana, … · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 30 Mey 2019 19:14 GMT
(Lahatsoratra teny Anglisy efa tamin'ny volana Oktobra 2005)
Tamin'ny 26 Oktobra, lasa firenena faha-15 nankatoa ny Arofenitry ny Sata Afrikanina momba ny zon'olombelona sy ny vahoaka mahakasika ny zon'ny vehivavy any Afrika izay miantoka ny fankatoavana ny Fitsipika ao anatin'ny 30 andro i Togo, hoy i Black Looks.
Zava-baovao sy mahataka-davitra ilay fitsipika hoy i Black Looks, ary miaro ireo karazana zo fototry ny vehivavy Afrikana no sady manamafy ny lalàna iraisam-pirenena momba ny fitovian'ny vehivavy. Cape Verde, Komoro, Djibouti, Gambia, Lesotho, Libya, Malawi, Mali, Namibia, Nizeria, Rwanda, Senegal, Afrika Atsimo ary Bénin ireo firenena hafa izay efa nankatoa ny Arofenitra hatramin'izao. Mbola miandry fankatoavana avy amin'ny firenena afrikana miisa 38 ny Arofenitra ary maro ny asa mbola mila ataon'ny fiarahamonim-pirenena sy ny fikambanam-behivavy Afrikana, tokony ho raisina ho toy ny fanombohana lehibe io fivoarana io.
Manome voninahitra an'i Hauwa Ibrahim, Nizeriana mpisolovava momba ny zon'olombelona izay anisan'ny nahazo ny Loka Sakharov amin'ny fahalalahana mihevitra avy amin'ny Parlemanta Eoropeana miaraka amin'ny Reporters Sans Frontiéres sy ny Vehivavy Miakanjo Fotsy ao Kiobà ihany koa i Black Looks. Manome voninahitra ho an'ny olona izay miasa miady amin'ny tsy fileferana, ny fanatisma ary ny tsindrihazolena izany loka izany. Niaro vehivavy maro voampanga ho nanitsakitsa-bady ary nomelohina ho faty tany amin'ireo firenena Nizeriana mampihatra ny lalàna Sharia i Hauwa Ibrahim.
Helenism manoratra momba ny fivavahana sy ny ady ao an-tsainy mikasika ny faniriana hiala amin'ny Fiangonana Ortôdôksa Eritreana, fivavahana nahalehibe azy sy ny Bodisma, finoana iray izay tsapany fa akaiky azy ary tsapany fa mety ho lalana mankany amin'ny fahatsapan-tena ara-batana sy ara-panahy.
Ny fahantrana, ny fitantanana tsy mahomby amin'ny toekarena, ny tsy fitoniana ara-politika sy ny ady no zava-misy tsy mitsaha-mitombo eto Afrika na dia manana harena an-kibon'ny tany marobe aza ny kaontinanta, hoy i Keeper of her thoughts nanoratra. Nilaza izy fa ny zavatra takiana dia “ny fitantanana tsara kokoa, andrim-panjakana matanjaka ary rafi-pitantanana mafonja kokoa” ary ny tena zava-dehibe dia ny fahavononan'ny Afrikana hampanao tamberin'andraikitra ny governemanta.
Tohizan'i Keeper ity lahatsoratra ity amin'ny fanomezam-boninahitra manokana ny Profesora Wangari Maathai – Mendrika tamin'ny Loka Nobel ho an'ny fandriampahalemana 2004, izay nolazainy fa vehivavy Afrikana ao anatin'ny herim-pony indrindra.
Ho ohatra amin'ny hoe tsy hahavitana zavatra ny mitabataba izay ilaina hovitaina, manoratra ny tantara izay novakiany vao haingana momba ny lehilahy iray izay mandeha any an'efitra miaraka amin'ny tranom-boky rameva i Bee ary “mitondra fahatakarana ny fomba filentehan'ny masoandro ho an'ny hafa amin'ny alalan'ny boky”.
Bronwyn indray maka sary tsara tarehy ary manoratra amin'ny fomba poetika ny vanim-potoanan'ny jacaranda any Johannesburg:
“When the jacarandas are in season it seems that the air itself becomes infused with a soft purple light. The flowers drift down on to your windshield as you drive and scatter the pavements everywhere as if a purple snowstorm has hit town…..and when the jacarandas are in bloom, you know that the whole summer stretches before you and it just makes you feel happy.”
“Rehefa tonga ny vanim-potoanan'ny jacarandas, dia hita fa lasa miparitaka amin'ny hazavana volomparasy malefaka ny rivotra. Milatsaka eo ambonin'ny fitaratry ny fiaranao ny voninkazo rehefa mitondra fiara ianao ary miparitaka eran'ny sisin-dalana rehetra tahaka ny hoe nisy oram-panala volomparasy namely ny tanàna ….. ary rehefa mamelana ny jacarandas dia fantatrao fa manomboka eo aminao ny fahavaratra manontolo ary mahatonga anao hahatsiaro sambatra izany. “
6 andro izayMediam-bahoaka